Fuji a odi nma igwe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Nyocha Fuji cambridge igwe kwụ otu ebe - azịza na-adịgide adịgide
Fuji a odi nma igwe?
FujiNyochaa Bikes.FujiE hiwere bikes na 1899 na Japan, nkeanamọ bụ otu n'ime ndị kasị ochieụlọ ọrụ igwe kwụ otu eben'ụwa. companylọ ọrụ ahụ dịkwaukwuna n'ichepụta ụwa-klas ụzọ anyịnya igwe-ha Transonic na Sportif bụnke kacha mmana-ere igwe kwụ otu ebe n'etiti oke ha.
Have kpebiri ịzụta ụzọ ịnyịnya ígwè mbụ gị, n'ụzọ dị ịtụnanya ị werela nzọụkwụ mbụ gị n'ime ụwa buru ibu karị, mana ịzụrụ igwe kwụ otu ebe mbụ gị nwere ike ịnwe ntakịrị ihe na mgbagwoju anya ebe ha dị ka ụdị dị iche iche nke ihe dị iche iche nwere ihe dị iche iche. gafere, yabụ anyị nọ n’isiokwu a aga m enye gị ntuziaka bara uru ma gwa gị kpọmkwem ihe ị ga-achọ na ihe dị iche bụ ihe m na-anụ ọkụ n’obi banyere ịgba ịnyịnya ígwè, yabụ ihe ọ bụla na-eme ka ọtụtụ mmadụ banye igwe kwụ otu ebe na na-eme ka agụụ ahụ dịkwuo mma. Ọ bụ ya mere anyị ji jikọọ ọnụ na Decathlon, ha nwere igwe kwụ otu ebe zuru oke nwere ọtụtụ atụmatụ dị iche iche ma ha dịkwa oke ọnụ ahịa maka ego, nke pụtara na nke a bụ ebe kachasị mma ka m gosi gị ihe niile ị gachara na m chọkwara kitesurf kite ohuru gbakwunye na echiche nke jiri otu okwute wee nwuo nnunu abuo. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọpụta ego ole ịchọrọ imefu, mana ego ole ị ga - emefu nke ọma enweghị azịza ziri ezi right zaa ajụjụ a, agbanyeghị, mgbe ị bịara ịzụ igwe kwụ otu ebe, ị nwere ike ịma na igwe kwụ otu ebe dị elu na-amalite na gburugburu 260 Oro, ma ọ bụ £ 250, dị ka nke a, na mgbe ị na-enweta ego karịa, okpokolo agba a na-adịkarị mfe ma sie ike na ihe ndị dị na okpokolo agba ndị a na-adị mfe. ọkaibe maka gburugburu 600 euro ị nwere ike ịnweta ọtụtụ igwe egwu igwe, ọtụtụ ihe amamihe dị na aluminom nwere ụfọdụ ihe ntinye dị mma karịa ikekwe breeki na igwe kwụ otu ebe na ụdị ọrụ a nwere ike ịmara, ị nwere ike ịmata nke ahụ .
Ugwu ma ọ bụ Alps nwere ike ịbụ na gị na agbụrụ dị iche iche na igwe kwụ otu ebe na ụdịdị dị iche iche m maara n'ihi na enwere ihe niile m mere na igwe ụkwụ m mbụ m ga-atụ aro ka ị ghara iji ego gị niile na igwe kwụ otu ebe, nke ahụ dị mma na mmefu ego maka ngwa niile dị mkpa dịka akpụkpọ ụkwụ na pedal, uwe na ihe niile ịchọrọ, ugbu a attentionaa ntị na nkọwa ole na ole mgbe ị na-ahọrọ igwe kwụ igwe gị, ihe ndị agbakwunyere na ya sitere na mkpokọta okwu maka brekị na sekit bụ otu ugbu a, e nwere ndị nrụpụta dị iche iche nke otu Campagnolo, SRAM microchip na ikekwe shimano kachasị ama, nke n'agbanyeghị agbanye ụdị akara ahụ na-abịa n'ọkwá ma ọ bụ ọkwa, ọ bụrụ na ị gbagoo otu ndị isi otu ha ga-adị oke ọnụ na akụrụngwa nweta ọkụ dị oke ọnụ karịa Ha na-enwetakarị arụmọrụ karịa ha na-arụ site na ihe ndị ọzọ dị egwu yana Na-agbanwe agbanwe ga-adịkwa nro ugbu a, igwe kwụ otu ebe na igwe ịgba ọsọ ịnyịnya ibu. A na-enyekarị ndị otu nke dị ala n'ọchịchị, ihe atụ magburu onwe ya bụ Shimano Sora, nke bụ otu mpaghara nke Shimano nke abụọ ma na-ejikarị ya na igwe kwụ otu ebe gburugburu 500 Pound price ga-achọta. otu ìgwè ya igwe kwụ otu ebe nwere Shimano na m dere ya ugwu na m ma ọ bụ Carall banyere ebe m ọbụna nọkwasịrị ụfọdụ agbụrụ na ya ma otu n'ime ihe ndị ị ga-ama nke gia ruru nke groupset bụ a igwe kwụ otu ebe nwere a 1132 cassette on azụ, nke m ga-akwado maka igwe kwụ otu ebe mbụ gị bụ ihe kpatara nke a bụ na nha ezé 32 a na azụ nke cassette bara ezigbo uru maka ugwu. Ọ pụtara na site na ịmegharị ụkwụ gị karịa, ị nwere ike ịnweta ọkwa dị elu ma ọ ga - eme ugwu ka ọ dịkwuo elu.
Nke a dị iche na ụfọdụ anyịnya igwe na-abịa na ubé ike cassette: 28 ntị na yinye set now nwekwara dị iche iche nha nke yinye, ihe m ga-akwado maka gị mbụ ụzọ igwe kwụ otu ebe bụ kọmpat yinye set bụ 50:34 bụ kedu ka anyị nwere ya ebe a na otu ihe kpatara m ga-akwado 32s, azụ azụ na-eme ka ugwu nta dị mfe ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido. Naanị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-amalite ụzọ biking ma chọọ ịnwe mgbatị nke nwere ike inyere gị aka ịrị ugwu ndị ị chọrọ, nnukwu azụ na obere azụ ntas ndị a kpọtụrụ aha na-abụ akụkụ nke ìgwè ahụ ma n'ozuzu ya, e nwere ụdị brek abụọ dị iche iche dị ka ị pụrụ ịhụ na igwe kwụ otu ebe a na brekị na breeki ndị a na-efu obere karịa rim brek mana gịnị ma ọ bụrụ na i bi ma ọ bụ na ị ga-aga ebe ugwu? na ugwu ugwu m ga-asị na ha bara uru maka mgbatị ahụ n'ihi na ha na-enye breeki siri ike karị nke na-agbanwe agbanwe karị na mmiri mmiri yana n'ozuzu ha nwere njikwa ka mma. Ekwesịrị m ikwusi ike na breeki brek ha jiri zuru oke iji merie Tour de France maka afọ 100 ma nwee uru na ha dị ntakịrị karịa breeki ndị a, ebe ọ bụ na ngwongwo ahụ nwere mmetụta dị ukwuu na ogo nke igwe kwụ otu ebe na ihe ndị a na-ahụkarị, aluminom, nchara na carbon nke gburugburu. 250 ruo £ 1,000, ọtụtụ ịnyịnya ígwè ị nwere ike ịchọta bụ nke alloy nke aluminom na nke ahụ dị mma n'ihi na aluminom bụ ihe dị iche iche dị iche iche nke na-enwusi ike nke ọma-na-ibu, ọ bụ ya mere eji eji ya eme ihe ụgbọelu, ọ bụkwa na-eguzogide ọgwụ ma na-eme ka ọ dị ọnụ ala karịa carbon fiber nke pụtara na ịnyịnya ígwè na-akwụ ụgwọ karịa otu puku euro ị nwere ike ịmalite ịhụ ọkwa ntinye carbon b icy dị ka vanreisel edr 105 ma ọ bụ abụ abụ, dị ka ha na-ekwu n'ihu, ebe anyị nọ ugbu a.
Carbon fiber na-adịkarị mfe ma sie ike karịa aluminom na nchara na-eme ka ikuku carbon dị mma bụ ezigbo ihe maka ịme ịnyịnya ígwè ma ọ bụrụ na mmefu ego gị anaghị ejupụta eriri carbon na-echegbula onwe m na ụzọ ụgbọ okporo ígwè mbụ m bụ aluminom mana ezigbo njirimara bụ otu igwe kwụ otu ebe nke aluminom nwere eriri ndụdụ nke Carbon nke a na-ebelata ibu, na-eme ka ndụdụ ahụ sie ike ma na-ebelata ịma jijiji n'okporo ụzọ yana ịba ụba site na njikwa na-ahọrọ akara a ma ama dị mma n'ụzọ dị otú a ị mara na e mebela ya ma nwalee ya. a siri ike akwụkwọ ikike na taya okpokolo agba uru a attentiona ntị na taya nwechapụ ihe ndị merrier m ga-ekwu dị ka nke a na-enye gị ukwuu egosipụta. You nwere ike ịdaba na taya sara mbara ma ọ bụrụ na-amasị gị, ọ bụrụ na ịchọrọ ụzọ ndị furu efu ma nwee obere njem ị nwere ike itinye ihe dịka mudguards, akpa akwa na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ yana nkọwa zuru ezu na etiti ahụ bụ ihe nkwado dị n'ala - ndị a bụ biarin nke nke igwe kwụ otu ebe na igwe na-agba n'èzí na-enweta akara ego na akwụkwọ m n'ihi na ndị a na-achọ obere ndozi ma na-adịru ogologo oge. Ana m agwa gị ugbu a gbasara wiil Imean dị ka ụdị isi akụrụngwa na ịnyịnya ígwè ọ bụla, ugbu a, igwe kwụ otu ebe na-abata na-abanyekarị na ụkwụ ụkwụ ụkwụ maka na ọ bụ ihe kachasị ewu ewu na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agbadata ala ahụ. Ha na-abanyekwu n'egwuregwu ahụ ma na-agbanweta ha maka ihe dị mfe, nke siri ike, na ikekwe karịa aerodynamic, ma na ndị a mma arụmọrụ àmà na wiil tinye na-eri, na ọ bụ ya mere ha ji elu price ala ma ọ bụ ntinye-larịị anyịnya igwe na-abịa na a dị mfe wheel, ma mgbe ị inyocha wiil gị igwe kwụ otu ebe na-achọ ihe m na-atụ aro bụ n'ezie nnukwu anwụrụ ọkụ ọnụ ọgụgụ n'ihi na nke a na-enyere aka mee ka wiil ahụ dị ike ma nwekwuo ike ga-atụ aro na ị ga-eleba anya na mbara igwe ahụ ịchọrọ ka rim ndị dabara adaba na taya sara mbara, yabụ ntakịrị wider rim obosara dị ka taya 25mm ma ọ bụ taya 28mm na-enye ntakịrị nkasi obi, ntakịrị ijide ma ha nwekwara ntakịrị nkwụsị na-agagharị agagharị, nke pụtara na ị nwere ike ịnya otu ọsọ ahụ na obere obere mgbalị.
Ọ bụrụ na ịnwe ogologo njem ma ọ bụ mee egwuregwu EOB anyị na-akwado ịkwalite ụfọdụ pedal na akpụkpọ ụkwụ na-enweghị mkpụmkpụ n'ihi na ndị a na-enye gị ohere ịda mba ma jiri ụkwụ na-aga njem iji mee ka ị nwekwuo ọfụma You nwekwara ike ịnweta igwe kwụ otu ebe ụmụ nwanyị, biko tọọ inwe otu etiti ma nwee ebe dị iche iche a ga-esi na-ahụ maka ọdịiche anatomical dị n'etiti nwoke na nwanyị, yabụ ị ga-enweta otu akụkụ dị larịị nke dị ntakịrị mkpụmkpụ na njikwa na obere obere mkpụmkpụ, mana nke a adịchaghị mkpa. Anyị na-akwado ka ị gaa maka ihe ga-adịrị gị mma n'okporo ụzọ, ọ ga - adị mfe ị ga - ahụ nke ahụ buru ibu na cassette ebe a na diski breeki na nke ahụ pụtara na ị nwere igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ ịgba ọsọ nke na - agbakarị n'okporo ụzọ. karịa igwe kwụ otu ebe, mana nwekwara ike ịnya na gravel ma ọ bụ iberibe alụlụ ọhụrụ, nke ị na-achọghị ime na igwe kwụ otu ebe, dị mma maka ndị nwere ala agwakọta na-achọ njem, ikekwe ị na-ebukọta igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ma eleghị anya naanị na-ebugharị onye na-achọghị naanị ịnọ n'okporo ụzọ. Cannwekwara ike gbanwee taya ochie maka ụfọdụ mkpa, nke ụzọ ụzọ gbagọrọ agbagọ ma nwee ezigbo ụzọ ịnyịnya ígwè, abụ m onye na-ahụ ụdị igwe kwụ otu ebe a, igwe elekere gravel na-abanye ihe dị ka narị ise na narị ise ma ọ bụ narị isii euro.
flywheel igwe kwụ otu ebe
Ìgwè ehi nwamba mere ezigbo ọrụ n'ịchọta egbe ọhụrụ m ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ mana echefuru m na achọrọ m ya ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na edemede a ma chọpụta na ọ bụ ihe ọmụma ma biko nye anyị ihe yiri ya na ịgbaso ma ugbu a ekpebiela igwe kwụ otu ebe ịchọrọ ka ị nwee obi ụtọ na anyị nwere isiokwu gbasara nke a na ụda nke ọdịnaya ndị mbido bara uru ọzọ. M na-ala ulo ugbua na egwuru egwu m
Ngwunye ngwakọ Fuji dị mma?
Ha bụezihọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ntụsara ahụigwe kwụ otu ebeiji gbagoro maka ọrụ, oge ezumike na mgbatị na-agba gburugburu obodo ma ọ bụ n'okporo ámá, ụzọ dị mfe, na oge njem njem dị mkpirikpi. Ha adighi eluanyịnya igwe.Mar 9 2017
nkịta ọhịa na-ebi ndụ valvụ
ịgba ịnyịnya ígwè mgbu
Fuji Bikes dị oke ọnụ?
Kemgbe ọtụtụ afọ ụlọ ọrụ ahụ mepụtara njedebe, arụmọrụ dị eluanyịnya igwenke nwere ike ịnagide nsogbu ọ bụla. Ya mere na-eme ka ha pụta n'elu asọmpi ha ọ bụrụ n'ihe gbasara nkasi obi, arụmọrụ, ogologo oge ma ọ bụ ọdịdị. Agbanyeghị, anaghị eme ọnụ ọnụ ala ma nwee oberedị oke ọnụ.Ọgọst 31 2020
Kedu ihe eji mara igwe kwụ otu ebe?
Na 1971,FujiAmerica ghọrọa maara dị kambụ Japanese brand na U.S., na innovations dị ka Mkpa ọkụ okpokolo agba. N'oge a,Fuji'saha dị ka mmaigweamalite ịrị elu. Nakwa na 1971,Fujiwebatara Sports 10, ọsọ 10igwe kwụ otu ebe, na-eguzobe akara ahụ.Mar 15 2021
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe bụ Fuji Bike?
Ọ bụ ezie na a maara Fuji nke ọma maka igwe kwụ otu ebe, ọ nwekwara ugwu ugwu, ngwakọ na ụmụaka ụmụaka n'ahịrị ya. Fuji nwekwara ogologo akụkọ ihe mere eme nke iwuli egwu mmeri na Keirin agbụrụ. Kacha ọhụrụ na Fuji ozi ọma na reviews na gravel Bikes
Kedu ihe kpatara Fuji ji kwaga mmepụta ha na Taiwan?
Na mgbakwunye na nke a, ụdị asọmpi na-enye anyịnya igwe dị ọnụ ala n'ahịa US. Fuji mechara kwaga mmepụta ya na Taiwan iji belata mmefu mana ndị ahịa US nwere echiche na-adịghị mma n'ebe anyịnya Taiwan nọ n'ihi na ha chere na igwe Japan mbụ ahụ ka mma.
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe bụ nkwupụta Fuji?
Nkwupụta Fuji bụ otu ọsọ, mbadamba ogwe osisi e wuru gburugburu igwe hi-tensile. Ọ na-e aomi a haziri na-ewu ewu na ịnyịnya ígwè ozi na ndị njem n'obodo na isi ịgba ígwè n'ógbè nlekọta ọrụ dị ka New York, LA, na London.